तनहुँमा रुघा खोकीसंगै भाइरल ज्वरोका विरामी बढे | | Nepali Health
तनहुँमा रुघा खोकीसंगै भाइरल ज्वरोका विरामी बढे
२०७३ साउन १८ गते ८:१३ मा प्रकाशित
तनहुँ, १८ साउन – केही समययता दमौलीमा रुघा खोकीसंगै भाइरल ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ । दमौली वरपरका स्थानबाट भाइरलका बिरामी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सदरमुकाम दमौलीका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा आउने क्रम बढ्दो छ ।
दमौली अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. अनिल गिरीले दमौली अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा दिनहुँ १५० देखि २०० जना बिरामी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउने बताए । तीमध्ये करिब १०० भन्दा बढी भाइरल, रुघाखोकी र टाइफाइडका बिरामी हुने जानकारी दिए ।
यो सङ्ख्या अन्य समयको भन्दा बढी भएको डा. गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै, आकस्मिकतर्फ पनि दैनिक ४० देखि ६० जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन् । दमौली अस्पतालमा उच्च ज्वरो, रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने, खसखस हुने, टाउको दुख्ने, नाक पोल्ने र सिङ्गान निस्कने लक्षण देखिएका बिरामी अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा जस्तै बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि उपचारका लागि जाने गरेका छन् । दमौलीमा रहेका हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि बिरामीको चाप बढ्न थालेको निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकले बताएका छन् । गर्मी मौसम भएपनि लगातारको वर्षाले चिसो हावापानीको कारण रोगको सङ्क्रमण छिटो हुने डा. गिरीले बताए ।
साथै, दूषित पानीको प्रयोग र असावधानीले ज्वरो तत्कालै सर्ने भएकाले अहिले सरुवा रोगका रुपमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । रासस
यसकारण सीधै नपिउनुस् फ्रिजको चिसो पानी
अब सूर्ति नियन्त्रणमा लाग्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ५० हजार राशीको पुरस्कार दिइने